दैनिकी राशिफल : वि.सं. २०७६ असार ११ गते बुधवार - Sutra TV Sutra TV
दैनिकी राशिफल : वि.सं. २०७६ असार ११ गते बुधवार
मेष : आफैलाई आशावादी हुन उत्प्रेरित गर्नुहोस्। यसले विश्वास र नम्रता बढ्छ तर त्यही समयमा डर, घृणा, डाह, बदला जस्ता नकारात्मक भावना छोड्न पनि तयार हुनुहोस्। विशेष गरेर प्रमुख वित्तीय सम्झौतामा बातचीत गर्दा, हतारमा निर्णय नलिनुहोस्। मित्रहरू सहयोगी र अत्यधिक मद्दतगार हुनेछन्। तपाईंकी प्रियतमाले पूरा दिन नराम्ररी तपाईंको सम्झना गर्नेछिन्। एउटा आश्चर्य मिलाउनुहोस् र यो दिनलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर दिन बनाउनुहोस्। नयाँ उद्यमले लोभ्याउँछन् र राम्रो लाभको प्रतिज्ञा गर्नेछन्। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग हुँदा कस्तो महसुस गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउनु हुनेछ। हो, तपाईंको जोडी त्यो जीवनसाथी हो।
वृष : तपाईंको लागि धेरै खुशी र आनन्द – किनभने तपाईंले जीवनको पूरा आनन्द उठाउने तय भइसकेको छ। ढिलो भएका भुक्तानी प्राप्त भएकोले पैसाको समस्यामा सुधार भएको छ। घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईंको तनाउ कम गर्नेछ। तपाईं पनि भागेदार हुनुहोस र मूक दर्शक जस्तो भएर नबस्नुहोस्। कसैको लागि बिहेको बाजा र कसैले आफुलाई ठूलो सोखमा राख्ने रोमान्स पाउनुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो काम राम्ररी गर्नुभएको छ – र अब आफ्नो बाटोमा आउने लाभहरू सङ्कलन गर्ने समय आएको छ। तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, सबै महत्त्वपूर्ण कागजातहरू बोक्नुभएको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। तपाईंको जोडी यति सुन्दर कहिल्यै थिएन। तपाईंलाई आफ्नो जीवनको प्रेमबाट राम्रो आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
मिथुन : आध्यात्मिक साथै भौतिक लाभको लागि ध्यान र योग अभ्यास गर्नुपर्छ। विगतका लगानीबाट आयमा वृद्धि हुने देखिन्छ। यस दिनलाई एउटा विशेष दिन बनाउन आफ्नो परिवारसँग साँझ मैनबत्तीको प्रकाशमा खाना खाएर आनन्द लिनुहोस्। प्रेम सधैं आत्मीय हुन्छ, र तपाईंले यसलाई आज अनुभव गर्नु हुनेछ। आज तपाईंको मनमा आएका नयाँ पैसा बनाउने विचारको फाइदा लिनुहोस्। आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। तपाईंको वैवाहिक जीवन आजभन्दा रंगीन कहिल्यै भएको थिएन।
कर्कट : तपाईंले परिस्थितिलाई जित्नु भयो भने पीर हराउनेछ। तपाईंले यसलाई साहसको पहिलो स्पर्शमा फुट्ने साबुनको फोकाजस्तो हो भनेर बुझ्ने सम्भावना छ। लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ। आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको लाभको लागि सकारात्मक सोचाइले आफ्नो शक्ति र विभिन्न सुझावहरू दिएर आफ्नो उपयोगिताको विकास गर्नुहोस्। भेटघाटको मिति कार्यक्रम असफल हुन सक्ने हुनाले निराशाको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। व्यापार सम्पर्कमा सुधार ल्याउनको लागि यात्राको सम्भावना छ। आध्यात्मिक गुरू वा बुजुर्गले मार्गदर्शन गर्नेछन्। अनपेक्षित अतिथिको कारणले तपाईंको योजनामा बाधा पर्ने सक्छ, तर यसले तपाईंको दिन राम्रो हुनेछ।
सिंह : आफ्नो स्वास्थ्यको बेवास्ता नगर्नुहोस्, विशेष रक्सीबाट जोगिनुहोस्। अनियोजित स्रोतबाट पैसा लाभ हुनाले आजको दिन उज्यालो हुनेछ। बच्चाहरुले यो दिन धेरै कठिन दिन बनाउन सक्छन्। तिनीहरूको चासो राख्न स्नेहको हतियार प्रयोग गर्नुहोस् र कुनै पनि अनावश्यक तनाउबाट जोगिनुहोस्। प्रेमबाट प्रेम फल्छ भन्ने याद राख्नुहोस्। प्रेमी जीवन आज विवादास्पद हुन सक्छ। तपाईंका वरिपरि मानिसहरूलाई धेरै प्रभाव पार्ने परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न तपाईं शक्तिशाली स्थितिमा हुनु हुनेछ। कुनै पनि समस्यालाई हटाउनको लागि इच्छा भएमा केही पनि असम्भव हुँदैन। आज तपाईंको आफ्नो जोडीसित गम्भीर तर्क हुन सक्छ।
कन्या : मुश्किल स्थितिको सामना गर्दा तपाईं दुखी नहुनुहोस्। खानाले आफ्नो स्वादको लागि नूनको ऋण लिएको हुन्छ – केही दुखको आवश्यकता पर्छ र त्यसपछि मात्रै तपाईंले आनन्दको मूल्य महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईंको मुड परिवर्तन गर्न केही सामाजिक जमघटमा जानुहोस्। लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। मित्रहरूसँग भेलाले सान्त्वना प्रदान गर्नेछ। प्रेमको परमानन्द अनुभव गर्न कोई फेला पार्न सक्नुहुनेछ। नयाँ सम्पर्क र व्यापार विस्तारको स्थापनाको लागि गरेका यात्राहरू धेरै फलदायी हुनेछन। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। आज तपाईंको जोडी साँच्चै नै राम्रो मुडमा छ। तपाईंले एउटा आश्चर्य प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ।
तुला : तपाईंको विनम्र व्यवहारको सराहना गरिनेछ। धेरै मानिसहरूले तपाईंको मौखिक रूपमा प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ। आफ्नो जोडीसँग राम्रो समझदारीले घरमा शान्ति, संवृद्धि र आनन्दमा ल्याउँछ। आज प्रेमको परमानन्दमा तपाईंको सपना र वास्तविकताको मिश्रण हुनेछ। नयाँ योजना र उद्यम लागू गर्नको लागि राम्रो दिन। समस्याको शीघ्रतापूर्ण कार्य गर्ने क्षमताले तपाईंको पहिचान बनाउनेछ। तपाईंले आज आफ्नो जीवनसाथीलाई अझै मायालु बनेको पाउनुहुनेछ।
वृश्चिक : आफ्नो कार्यालयबाट छिट्टै बाहिर निस्किनुहोस् र तपाईंलाई साँच्चै आनन्द आउने काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। हतारमा निवेश नगर्नुहोस्। यदि निवेश गर्दा तपाईंले सबै सम्भव कोणबाट हेर्नु भएन भने घाटा निश्चित छ। घरेलू घरधन्दामा आफ्नी पत्नीलाई उनको कार्यभार कम गर्न सहयोग गर्नुहोस्। यसले साझेदारी र आनन्दको लागि प्रोत्साहन दिनेछ। कार्डमा रोमान्स छ तर इन्द्रियका भावनाहरू प्रकट हुनाले तपाईंको सम्बन्ध बिगार्नेछ। तपाईंले आफ्नो बुद्धि र प्रभाव कामका कुराहरू मिलाउने विषयमा लगाउनु आवश्यक छ। आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। कुनै आफन्त, मित्र वा छिमेकीले आज तपाईंको वैवाहिक जीवनमा खिचलो ल्याउन सक्छ।
धनु : आफ्नो तनाउबाट राहत पाउनको लागि परिवारका सदस्यहरूको सहायता लिनुहोस्। तिनीहरूको मद्दत अनुग्रहपूर्वक स्वीकार्नुहोस्। तपाईं भित्र भावना र दबाब भरिनु हुँदैन। प्रायजसो आफ्नो समस्या साझेदारी गर्नाले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ। आर्थिकमा सुधार आउनाले तपाईंलाई लामो समयसम्मका बकाया र बिलहरू तिर्नको लागि सुविधा हुनेछ। परिवारका कार्यहरू र महत्त्वपूर्ण समारोहको लागि एउटा शुभ दिन। अनपेक्षित रोमान्टिक झुकाव हुनेछ। आज तपाईंले आफुले राम्रो काम गरिरहेको आफ्ना परिवारको समर्थनले हो भन्ने कुराको महसुस गर्नु हुनेछ। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीसित आफ्नो जीवनको सबैभन्दा राम्रो समय बिताउनु हुनेछ।
मकर : अरूको आलोचना गर्नमा आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस् किनकि यसले तपाईंको स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छ। आर्थिक समस्याले तपाईंको निर्माणात्मक सोच्ने क्षमतामा हानि पुर्याउनेछ। तपाईंमध्ये कसैले गहना वा घरको उपकरण खरिद गर्ने सम्भावना छ। तपाईं साँझ साथीहरूसँग बाहिर जानुभयो भने तत्काल रोमान्स आउन सक्छ। सहकर्मी र वरिष्ठहरूले पूर्ण सहयोग दिएकोले कार्यालयमा काम छिट्टो हुनेछ। कुनै पनि समस्यालाई हटाउनको लागि इच्छा भएमा केही पनि असम्भव हुँदैन। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको लागि साँच्चै विशेष कुरा गर्नेछन्।
कुम्भ : तपाईंमा धार्मिक भावना उत्पन्न हुनेछ जसले गर्दा तपाईंलाई साधु-संतहरूबाट केही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त गर्न धार्मिक स्थलको भ्रमण गर्ने मन लाग्नेछ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। यो अवधि आफ्नो नयाँ परियोजनाहरू र योजनाको सन्दर्भमा आफ्ना आमाबाबुलाई विश्वासमा लिनका लागि राम्रो छ। भोलि धेरै देरी हुन सक्छ यसैले तपाईंले आफ्नी प्रियतमालाई आफ्नो सन्देश व्यक्त गर्नुपर्छ। नयाँ उद्यमले लोभ्याउँछन् र राम्रो लाभको प्रतिज्ञा गर्नेछन्। गफ र अफवाहहरुबाट टाढा रहनुहोस्। रोमान्टिक गीतहरू, खुशबूदार मोमबत्ती, राम्रो खाना, र केही पेयहरू; यो दिन आफ्नो जोडीसित यस्तै नै हुनेछ।
मीन : मित्र वा जानकारको स्वार्थी व्यवहारले तपाईंको मानसिक शान्तिमा बाधा पुर्याउँछ। आज तपाईंले सजिलै धन बढाउन सक्नुहुन्छ – उल्लेखनीय ऋण सङ्कलन गर्नुहुन्छ – वा नयाँ परियोजनाहरूमा काम गर्नको लागि धनको अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। घरेलु जीवन शान्तिपूर्ण र प्यारो हुनेछ। यो अचम्मको दिनमा तपाईंका सम्बन्धमा भएका ती सबै उजुरी र ईर्ष्या अचानक हराउनेछन्। आज तपाईंलाई काममा राम्रो समाचार प्राप्त हुन सक्छ। आज तपाईं पूर्ण रूपमा राम्रो विचारको हुनुहुन्छ र तपाईंका रुचिका गतिविधिहरुले आफुले आशा गरेभन्दा धेर लाभ गराउने छन्। तपाईंको आफ्नो जोडीसित तनाउपूर्ण सम्बन्ध हुनेछ र अब हुनुपर्ने भन्दा लामो रहने गम्भीर असामंजस्यताहरू हुन सक्छन्।